Iresiphi ye-"Goulash" nge-fletlet yenkukhu kanye nama-mushroom
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Imifino Izaqathe
Goulash nge fillet inkukhu kanye nezigulane
"Goulash" nge inkukhu namakhowe Guliash wathatha amakhotheshini, noma kunalokho iresiphi izobizwa ngokuthi stewed inkukhu fillet namagundane utamatisi. Kodwa sibiza le nsiza ngokuthi "goulash". I-recipe iyakhaka ngenxa yokutholakala kwayo. Isidlo siyakufanelekela ukupheka kwansuku zonke. I-sauce esiphundu neyigqinsi iqinisekisa inhlanganisela enkulu kakhulu kunoma yikuphi iphalenda, amazambane ahlambulukile. Esikhundleni somhluzi, ungasebenzisa umhluzi wemifino noma amanzi. Izinongo kanye nezikhathi zokuphunga zisebenzisa ukunambitheka kwakho. Kuhle kakhulu ukuhamba nopele omnyama omusha, ama-herbs omisiwe.
Amakhowe amasundu 200 g
I-anyanisi 120 g
Utamatisi unamathisele ku-70g
Cream Cour 130 g
Inkukhu umhluzi 200 ml
Isinyathelo 1 Lungisa i-chicken fillet, amakhowe, ukhilimu omuncu, utamatisi unamathele, anyanisi ehlutshiwe kanye ne-izaqathe.
Isinyathelo 2 anyanisi kanye izaqathe zibe yizicucu ezincane zobukhulu, kancane kancane gazinga emafutheni omifino.
Isinyathelo sesi-3 Hlanganisa futhi izingcezu ezincane ze-inkukhu ehlanziwe futhi eyomisiwe, encibiliwe ezincekeni ezincane.
Isinyathelo 4 Manje engeza amakhowe ahlanzekile, oqoshiwe ngokulingana nensipho yenkukhu.
Isinyathelo 5 Beka ukunamathisela utamatisi epanini lokuthosa, gubungela kancane, uthele amanzi atshisayo. Usawoti kanye nenkathi nezinongo. Letha emathumba, unciphise ukushisa bese umile imizuzu engu-15-20.
Isinyathelo 6 Hlanganisa ukhilimu omuncu ngefulawa, gubungula.
Isinyathelo 7 Engeza u-ukhilimu omuncu ngopuphu ku-mass mass, ugubungele ukuze kungabikho izibani. Isidlo somunye imizuzu engu-10. Khonza i-goulash esimweni esishisayo.
Ikhekhe ngamakhowe kanye noshizi le-stilton
Cutlets kusuka turkey nge sauce sweet and omuncu
Ingulube ebilisiwe ebomvu ngemifino yezimpande ebhakabhaka
Isobho se-Cream nama-lens
Isaladi lekhekhe le-Easter
Umyeni ka-Elton John wanikeza umqeqeshi wakhe indawo yokuhlala
Indlela yokugqoka ubucwebe: amathiphu we-stylist
Indlela yokudla kahle uma wenza ukuqina nokudansa
I-pizza yase-Thai nenkukhu
Izifo zegciwane lesandulela izingane. Ukuvimbela nokwelapha
Yiba mnandi kakhulu ku-Eva Wonyaka Omusha
Uyini udade (umzala nomzala wokuqala)
Ukusikwa kwe-Turkish: izinhlobo, izinzuzo nobuchwepheshe
Imikhiqizo eyishumi ewusizo kakhulu
UVera Brezhneva wanquma ukuphawula ngenkulumo mayelana nokukhulelwa kwakhe
Amaqembu abanjwe ama-Creative for the Year New: indlela yokuhlela iholidi elijabulisayo